Iindaba-Kutheni ukhetha i-US
Siyathembisa, ireyithi efanelekileyo yeemveliso yi-100%, kwaye ixesha lewaranti yiminyaka emi-3. Thobela ikhontrakthi kwaye uzalisekise ngokunyanisekileyo imigaqo yesivumelwano: ukuhanjiswa kwangexesha, isaziso ngexesha lokuhanjiswa kwempahla kwelinye iqela; ukwazi inkonzo, hlala ume ekuphakameni okuyalelayo kwemfuno yomsebenzisi, usete ukubonisana ngenkonzo yemozulu yonke; Abasebenzi benkampani yethu ukoneliseka ngumthengi njengekhrayitheriya, umthengi uhlala elungile, inkonzo ingcono kuphela, akukho nto ilungileyo, inkonzo Ayikwazi ukubuyela umva; Yenza umsebenzi olungileyo wokubuyela kubathengi ngexesha, funa izimvo zabathengi, uphucule ulwazi ngemveliso, kwaye uphendule ngokukuko kwaye uphakamise izisombululo kwiingxaki ezahlukeneyo eziphakanyiswe ngabathengi, ukwenzela ukulungisa iingxaki ngexesha elifanelekileyo de abathengi baneliseke.
Inkqubo yovavanyo oluzenzekelayo:
Zonke iimvavanyo ezikhawulezayo zizenzekelayo.Okukuphucula ukusebenza ngokukuko kuphela, kodwa kuqinisekisa nabasebenzi.
Uninzi lweenkampani ezidumileyo njengegridi yeqonga
Ingcinga yeshishini lenkampani:
Khangela imarike esekwe kumgangatho, funa uphuhliso ngokunyaniseka; yamkela umhlaba omtsha kunye nobuchwephesha obuphezulu, iseke ubambiswano phakathi kwenkampani, yenza isihloko esiphambili; yenza isicwangciso seebhiliyoni zobutyebi, ukuba ubalasele nangaphambili, inyhweba yobukhulu ngokwemeko yentengiso, inkampani, ukuphumelela kokuthenjwa kweqela labasebenzi elizinikeleyo ngobukrelekrele, ubukrelekrele kunye nokusebenza ngokukuko, iphuhlisa umgangatho ophezulu kunye nenkonzo ephezulu kunye namashishini akumgangatho ophezulu.
Ngokusekwe kumgangatho ogqwesileyo, uyilo olunamava kunye namandla okwenza, ukuxabisa amaxabiso okhuphiswano, Sithengise iimpahla eAsia, iYurophu, iMelika, uMbindi-Mpuma kunye neAfrika, ect, ngaphezulu kwamazwe angama-60 kunye neendawo.
Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, nceda unxibelelane nathi ngokukhawuleza !!!
Imeyile: (Imeyile ikhuselwe)
IteL: (86) 311-82232877 / (86) 13932102798
Ikhowudi yeposi: 050200